उपभोक्ता MGTS लागि समर्थन Gpon राउटर हुन्छ एक पटक, त्यो यसको सेटिङ हेरविचार गर्नुपर्छ। यो कदम हो जो 2,500 Mbit / को इन्टरनेट, अधिकतम गति प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ। रूटर को उत्कृष्ट प्रदर्शन धन्यवाद एक एकदम ठूलो ठाउँ संचार कवर गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाँडै घर खरीदारों माझ लोकप्रियता हासिल गर्न यी उपकरणहरू अनुमति दिएको छ। यसबाहेक, धेरै निर्माताहरु संग राउटर एउटा सानो शुल्क लागि उत्कृष्ट दर प्रस्ताव समावेश छन्।
यस लेखमा हामी MGTS प्रविधिको नै सुविधाहरू छ, जो काम वाइफाइ राउटर MGTS GPON, को कसरी सिद्धान्तहरू तथ्यलाई विचार गर्नुहोस्। साथै, यो राउटर कन्फिगर गर्न कसरी, र सबै सम्भव नेटवर्क समस्या वर्णन बारेमा प्रश्न गरेर उज्यालो हुनेछ। अन्त्यमा गरेको बताए गरिएको छ के संक्षेप गरौं।
बोल्ने GPON विशेषज्ञहरु द्वारा के अर्थ छ? यो एक विशाल गति दिने सक्षम छ जो अप्टिकल नेटवर्क, बुझाउँछ। नियम, स्पष्ट अतिरिक्त यसको आंकडा, हामी विशिष्ट घर प्रयोगको बारेमा कुरा भने। कुनै पनि खेल र एक स्मार्ट (4 हजार) संग भिडियो गुणस्तर 100 एमबी प्रति सेकेन्ड को पर्याप्त गति हुनेछ। कि राउटर MGTS किन अक्सर वेब प्रयोगकर्ता को एक ठूलो संख्या पहुँच प्रदान गर्न प्रयोग गरिन्छ। गुणस्तर संकेत। कहिलेकाहीं राउटर केही समस्या अनुभव हुन सक्छ। भाग तपाईं ट्याबलेट, ल्यापटप, स्मार्ट फोन एकै समयमा काम गर्ने वायरलेस पहुँच बिन्दु सिर्जना गर्न आवश्यक छ। महत्वपूर्ण MGTS वाइफाइ राउटर पासवर्ड स्थापना गर्न नबिर्स।
MGTS प्रदान गरिन्छ कि ती routers किनभने आफ्नो कम गति को लोकप्रिय छन् र बहु मोड सुनिश्चित गर्नुहोस्। तिनीहरूले पनि दुवै तार र वायरलेस कनेक्शन समर्थन। लाभ अझै पनि के छ हो? NAT टाइप GPON,4लैन connectors, वीओआईपी गेटवे प्रकार, र उच्च गतिको नेटवर्क लागि समर्थन संग कुनै पनि अन्य उपकरण संग उपकरण routers: तिनीहरूले यी उपकरणहरू प्रतिस्थापन गर्न सक्छ। कसरी सामान्य साधारण प्रयोगकर्ता यो बुझ्न? यी routers सजिलै छिटो घर वा कार्यालय नेटवर्क प्रदान गर्न सक्छन्। 300 Mbit प्रति सेकेन्ड - को routers को सबै भन्दा अधिकतम स्थानान्तरण दर समर्थन गर्दछ।
निर्माता MGTS हालसालै रूसी संघ को क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दछ एक सेवा प्रदायक रूपमा काम गर्न थालिन्। को बारे मा 15 वर्ष को लागि यो बजार मा। मात्र 2013 मा कम्पनी एक फाइबर ओप्टिक नेटवर्क निर्माण गर्न एक परियोजना सिर्जना गरियो। एउटा सानो शुल्क उत्कृष्ट दर प्रदान गर्न को लागि प्रदायक सक्षम छ। 200 Mbit / को - न्यूनतम मा, एक 30 एमबीपीएस र अधिकतम एक जडान गति छ। नेटवर्क कन्फिगरेसन समयमा उत्पन्न राउटर MGTS को आईपी-ठेगाना।
यसबाहेक, दृढ MGTS नै एक एकाधिकार रूपमा प्रस्तुत। यसलाई इन्टरनेट सेवा मात्र होइन प्रदान गर्दछ, तर पनि फोन, साथै सामान्य जडान छैन। को वर्णन नेटवर्क मा संचालन सदस्यहरू, 200 भन्दा बढी च्यानल मा डिजिटल टिभी प्राप्त गर्न सक्छ। प्रदायकहरूको मानक डाटा दर प्रयोगकर्ता वृद्धि भएपछि बिस्तारै GPON मा ADSL राउटरमा देखि सार्नु।
रूटर MGTS स्थापना
ग्राहक MGTS संग एउटा सम्झौता निष्कर्षमा भएपछि, त्यो तुरुन्त विशेष राउटर प्राप्त लेख मा उल्लेख। यस्तो यन्त्र पहिले नै स्थापित छ, सबै आवश्यक डाटा छ, त्यसैले यसलाई सानो छ - मालिक ग्याजेटहरू र अन्य उपकरण संग जडान गर्न आवश्यक छ।
यो कहिलेकाहीं रिसेट लागि आवश्यकता छ कि सम्भव छ। के गर्ने? धेरै मानिसहरू कला मा एक कुशल यसलाई आउटसोर्स गर्न पनि समायोजन आफैलाई बनाउन प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ रुचाउँछु।
तपाईं पहिले नै राउटर MGTS, अर्थात् एक वायरलेस जडान कन्फिगर गर्न सुरु गर्नु अघि, तपाईं DHCP सञ्चालन जाँच गर्न आवश्यक छ। कसरी समायोजन गर्न र कसरी गर्ने? कठिनाइ उत्पन्न हुँदैन। सबै आवश्यक डाटा आधारभूत सेटिङ ट्याब मा नियन्त्रण प्यानल मा निर्दिष्ट हुनु पर्छ। तपाईं यसलाई के गर्न आवश्यक के? जब सञ्चालन सही निर्दिष्ट सर्भर सजिलै सबै जडान उपकरणहरूमा नेटवर्क ठेगाना वितरण गर्न सक्नुहुन्छ।
अब तपाईं एक वायरलेस पहुँच बिन्दु सेट अप गर्न तयार छन्। यो "मूल मापदण्डहरु" मा नियन्त्रण प्यानल जाने गर्नुपर्छ। त्यहाँ प्रयोगकर्ता स्तम्भ देख्ने "वायरलेस नेटवर्क।" तपाईं यसलाई सक्षम हुनुपर्छ। यो संवाददाता वस्तु मा एक चेकमार्क सेट गरेको छ। यस SSID आवश्यक संकेत हुनुपर्छ। यसलाई म कहाँ पाउन सक्छौं? MGTS राउटर कारखाना स्टिकर छ मा यो जानकारी छ। कुनै अन्य सेटिङ परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।
सुरक्षा र वायरलेस जडान
आफ्नो वायरलेस नेटवर्क सुरक्षा पासवर्ड स्थापना गर्दैन भने, त्यसपछि यो अपरिचित वा घुसपैठियों जोड्न सक्नुहुन्छ। किन सेटिङहरू गर्दा, तपाईं यो nuance हेरचाह गर्न आवश्यक छ। प्रतीक को संयोजन गोप्य हुनुपर्छ। के जडान अनधिकृत प्रयोगकर्ता खतरनाक? गति कम र व्यक्तिगत डाटा जोखिममा हुनेछ। के यो एक पासवर्ड सेट अप ले? तपाईं "सुरक्षा" ट्याबमा जान पहुँच बिन्दु लागि नाम निर्दिष्ट र विशेष बक्स मा गोप्य संयोजन निर्दिष्ट गर्न आवश्यक छ। तिनीहरूलाई नेटवर्क काम कुनै पनि समस्या हुनेछ बिना रूपमा अन्य मापदण्डहरू, स्थापित गर्न आवश्यक छैन। कि पछि, बस यस्तो राउटर, MGTS रूपमा उपकरणको लागि निर्दिष्ट सेटिङ बचत गर्न, र नियन्त्रण प्यानल बाहिर निस्कन आवश्यक छ।
धेरै मानिसहरू सोध्छन्: "? के डाटा गुप्तिकरण विधि प्रयोग" सबै भन्दा राम्रो WPA2-PSK छ। यो प्रविधि मजबूती लिंक "रक्षा" हुनेछ। पासवर्ड जटिल र स्मरणीय साथ आउन आवश्यक छ। सबै को सबै भन्दा राम्रो, यदि यो ठूलो र सानो वर्ण र अङ्कहरू हुनेछ। यो यस्तो जन्म मिति रूपमा प्रकाश संयोजन हटाउन आवश्यक छ, पाल्तु जनावर को नाम र सामान्य सेट 123456।
तपाईं एक राउटर ZTE वा अन्य कुनै पनि अनुभव कुनै पनि समस्या संग काम गर्दै भने, नेटवर्क पहुँच अक्षम छ, र समस्या आफैलाई ठीक तपाईं सक्दैन तपाईंले तुरुन्तै निर्माता सेवामा केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुपर्छ, वा कम से कम प्रदायक। कहिलेकाहीं समस्या पनि कारण अनुचित अन्तरक्रियामा गर्न देखा पर्न सक्छन्, प्रयोगकर्ता निर्भर कुनै तरिका हो। यस्तो समस्या GPON नम्बर routers संग MGTS प्रविधिहरू प्रयोग गर्दा यो उल्लेख गर्नुपर्छ हुनत एकदम कम खडा गरेका छन्। यस मामला मा, उपकरण को समायोजन भन्दा यो पहिले थियो धेरै सजिलो भएको छ।
रूपमा लेख पढेपछि बुझे गर्न सकिन्छ, ZTE र अन्य राउटर कन्फिगरेसन एकदम सरल र जटिल छैन। यो लगभग एक विशेष मोडेल निर्भर छैन, सूचना आवश्यक छ। अधिकतम आपसमा फरक भन्दा - नियन्त्रण प्यानल इन्टरफेस, साथै निर्माताको लोगो। यसबाहेक, मालिक को बहुमत पनि स्थानान्तरण बन्दरगाह बनाउन आवश्यक छैन। कुनै पनि विशिष्ट आवेदन, यस्तो खेल र यति मा प्रयोग गर्दा उहाँले आवश्यक हुनेछ। यस्तो राउटर MGTS रूपमा उपकरणको पूर्ण अनुकूलन गर्न, 20 भन्दा बढी मिनेट आवश्यक छैन।
अफसेट कागज: आवेदन र किसिमहरु
संरचनात्मक सूत्र - ग्राफिक प्रतिनिधित्व पदार्थ
के भिटामिन सुझाव, nuances, बुँदा चयन